उपत्यकामा रगत अभाव, दैनिक साढे २०० पिन्ट माग spacekhabar
ठाकुरको हेमोग्लोबिन न्यून भएकाले नियमित डायलाइसिसका लागि रगत आवश्यक परेको हो।
रेडक्रसको केन्द्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रले पनि रगत अभाव भएको जनाएको छ। केन्द्रकी निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकारले भनिन्, ‘चाडबाड भएकाले रक्तदान कार्यक्रम हुन सकेन। पर्याप्त रगत संकलन हुन नसकेकाले अभाव भएको हो।’
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा रगत अभाव देखिएको हो। दैनिक दुई सय ५० पिन्ट रगत माग छ। दसैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वका कारण रक्तदान नहुँदा मौज्दातमा राखिएको रगत सकिन लागेको डा. कर्णिकारले बताइन्। दसंैअघि डेंगुको प्रकोप भएका बेला रगत उपयोग बढी भएकाले अहिले अभाव देखिन थालेको हो।
आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक अन्य बिरामीलाई रगत दिन नसकिने अवस्था रहेको सेवा केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार विशेष गरी नेगेटिभ समूहको रगत कमी छ। मुटुको शल्यक्रिया लगायतका कतिपय जटिल अवस्थामा एकैपटक दश–बाह्र पिन्ट रगत चाहिने भएकाले मौज्दात रित्तिँदा समस्या भएको हो।
डा. राजकर्णिकारले मौज्दातको परिमाण खुलाउन अस्वीकार गरिन्। ‘अहिले आकस्मिक (इमरजेन्सी) लाई मात्र व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्। रगत अभाव भएपछि रेडक्रसले विभिन्न संघसंस्था र रक्तदाता समूहलाई दान गर्न आह्वान गरिएको छ। १८ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका व्यक्तिले रक्तदान गर्न सक्ने डा. कर्णिकारले बताइन्। ‘स्वास्थ्य परीक्षणपछि योग्य व्यक्तिले वर्षको चारपटकसम्म रक्तदान गर्न सक्छन्’, उनले भनिन्। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक १४, २०७६, ०७:४०:००